I-Libra ibizwa ngokuthi i- constellation ye-zodiacal eningizimu yaseningizimu yesibhakabhaka ebusuku. Igama lesiLatin lithi "libra". AmaSomeriya yakudala abiza ngokuthi i-constellation Zib-Ba An-Na, okusho ukuthi "ibhalansi yezulu". I-constellation yeLibra iphakathi kwezinkanyezi ze-Scorpio ne-Virgo. Ngendlela, e-astronomy yaseBabiloni isibonakaliso sakhe sasimelwe ngendlela yamahlumela. Kodwa-ke, kwakukhona iphutha ekuhumusheni isi-Arabhu igama elithi "zubana" negama lama-Akkadian elithi "zibanitu", zombili zazo ezingasho ukuthi "izilinganiso" kanye "ne-scorpion". Iba nomumo we-scorpion umisiwe phansi, futhi waziwa ngokuthi "ugobe lukaScorpion" ngaphambi kwekhulu lokuqala le-BC, alizange ahlonishwe ngaphambi kwe-constellation yeLibra.
Ngaphezu kwalokho, kwaphakanyiswa ukuthi lesi sibonakaliso se-Zodiac, njengokungathi sihlaba iqiniso lokuthi uma i-Sun ingena kule ngxenye ye-ecliptic, i-equinox ye-autumnal ifika. Ezingqungqutheleni zasendulo zaseGibhithe, i-Libra yama-constellation, "yi-Balance of Truth" ne "The Last Judgment", ibuyele emidlalweni yaseGibhithe ye- afterlife, lapho isetshenziselwa ukulinganisa imiphefumulo yabafileyo. Ngaphezu kwalokho, zihlotshaniswa nonkulunkulukazi u-Maat, njengonkulunkulu waseGibhithe wasendulo, owawuhlobene nalesi siqhwa. Wayeyindodakazi kaRa futhi wahlonipha iqiniso, ubulungiswa kanye nokuvumelana kwendawo yonke.
Ezingqungqutheleni zamaGreki, i-Libra iyinhlangano yezinkanyezi ezimelela i-Golden Chariot yePluto, ehlanganiswe ngamahhashi amane amnyama. Ngelinye ilanga, emva kokuvakashela izwe elizayo enqoleni yakhe, uPutto wabona iPhonephone, indodakazi kaZeus noDemeter, unkulunkulukazi wokuzala. Indaba yokuqothulwa yiPlora Persephone iyi-mythology yamaGreki eyaziwayo eveza izitshalo ezivusa entwasahlobo, ukunikeza nokuphunyuka emhlabeni emva kokuvuna.
Izinganekwane zaseRoma zasendulo zithi ukubonakala kwesibhakabhaka saseLibra ku-Emperor Augustus, owayedume ngokulunga kwakhe. Ekwazisa umuntu omkhulu, lezi zihloko zazingcolisa igama lakhe, zibiza lesi sibonakaliso se-Zodiac ngenkumbulo yobulungiswa buka-Augustus.
Namuhla, isibonakaliso siboniswa njengesikali esabanjwe uThemis, unkulunkulukazi wobulungisa waseGrisi , ngaleyo ndlela ahlobanisa ne-constellation engumakhelwane we-Virgin.
Lesi kuphela isibonakaliso se-Zodiac, esingabonakali uhlobo lokuphila.
I-constellation yaseLibra ihlanganisa indawo engama-degree angu-538 futhi iqukethe izinkanyezi ezintathu ngamaplanethi adumile. Kungabonakala ezindaweni eziphakathi kuka-+65 ° no -90 °, futhi kubonakala kahle ngo-9: 00 ngoJuni. Esikhathini sezinkanyezi ze-stellar, i-Sun idlula iLibra phakathi kuka-Okthoba 16 noNovemba 15, kanti nasezinkanyezini ezishisayo zithathwa kuloluphawu phakathi kukaSeptemba 23 no-Okthoba 23.
I-constellation yaseLibra, isithombe osibona ngenhla, asinayo imilayezo ekhanyayo, kodwa kukhona okungase kube nesithakazelo kubabukeli. I-telescope enkulu ingabonakala inhlobonhlobo yezinkanyezi ze-NGC 5885, enesilinganiso sobukhulu esingu-11.7, esiseduze neBeta Libra. Ibuye ibuyele ku-Gliese 581C, i-exoplanet yokuqala eyatholakala ihambahamba ngokuzungeza inkanyezi yomzali wayo, ibomvu elibomvu i-Gliese 581, ngaphakathi kwendawo ewakhiwe yenkanyezi. Le phlanethi yomhlaba washo ngo-2007. Enye iplanethi, ejikeleza inkanyezi efanayo, i-Gliese 581e - ukuxoxisana nge-mass encane kunazo zonke, itholakala ejikeleza inkanyezi evamile.